खोइ कहाँ छ सरकार ?
Homeराष्ट्रिय खबरखोइ कहाँ छ सरकार ?
काठमाडौं । सरकारमा संलग्न भएका दलका सांसदहरूले संघीय संसदको बैठकमा सरकारविरुद्ध आवाज उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहिबार बसेको बैठकमा उनीहरूले मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिँदै सरकारले गरेका गतिविधिहरूमाथि नै प्रश्न उठाएका हुन् । उनीहरूले सरकारले विद्यार्थीलाई किताव उपलब्ध गराउन नसकेको, किसानलाई मल दिन नसकेको र मूल्यवृद्धिले जनतालाई आहातमा पारेको भन्दै सरकार कहाँ छ भनेर प्रश्न गरे ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले सरकार जिम्मेवार र बफादार नबनेको बताइन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको उनको भनाइ छ । खेती लगाउने बेला किसानले मल नपाएको पनि उनले बताइन् ।
महँगीले नागरिकको ढाड सेके पनि महँगी नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान पुर्याउन नसकेको उनको भनाइ थियो । हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना भए पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेकोतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘सरकार कहाँ छ रु जिम्मेवार र बफादार बन्नुपर्दैन रु,’ बैठकमा बोल्दै उनले प्रश्न गरिन् ।
यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले सरकारले दुईदिने बिदा कटौती गरेर राम्रो गरेको बताउँदै ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि विद्यालय र कार्यालय समय फरक बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे ।
बिहीबारको संसद् बैठकमा बोल्दै उनले काठमाडौंमा ट्राफिक जाम हुने समस्या समाधान नभएकाले कार्यालय समय फरक पार्नुपर्ने बताए । ‘फोहोरमैला र मूल्यवृद्धिको समस्या खेपिरहेका नागरिकले ट्राफिक जामको समस्या भोगिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्न धेरै समय लाग्ने गरेको छ । विद्यालय खुल्ने समय र कार्यालय समय फरकफरक समयमा हुने व्यवस्था मिलाउन सके सडकमा जाम कम हुन्छ ।’
स्थानीय चुनावमा एमाले र कांग्रेसले कति मत पाए ?
उपेन्द्र यादवले धोका दिएपछि जसपा फुट्दै